ကိုယ် သဘောကျ တဲ့ကောင်လေး ရဲ့ပုံစံ ကို ပရိသတ် ကိုမျှဝေလိုက် တဲ့ ခင်သဇင် - Tha Dinn Oo
ကိုယ် သဘောကျ တဲ့ကောင်လေး ရဲ့ပုံစံ ကို ပရိသတ် ကိုမျှဝေလိုက် တဲ့ ခင်သဇင်
ရုပ် ရှင်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေး ခင်သဇင်ကတော့ လေယာဉ်မယ်တစ်ယောက်ဘဝကနေ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဘဝကို ကူးပြောင်းလာသူပါ။ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းအပြည့်နဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့် ပရိသတ်အသိမှတ်ပြုတဲ့သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာသလို မကြာသေးခင်က MRTV-4 မှာထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ အချစ်ဖွဲ့လေညှင်း ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း မိုးကလျာ ဇာတ်ရုပ်နဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိ ခဲ့ပါသေးတယ်။
အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမထူးသေးတဲ့ခင်သဇင်ကတော့ ဒီနေ့မှာ သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ အနာဂတ်ခင်ပွန်းလောင်းတစ်ယောက်မှာ ရှိရမယ့်အချက်တွေကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ” ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အဆင်ဆိုတာ ရှိပြီးသား… ယောက်ျားလေးဆို အမွှေးအမျှင်ပါမှ – ဥပမာ_ ပါးသိုင်းမွှေး.. ခြေလက် အကြောဆို ထောင်နေမှ ..အသားဆို ဖြူဥထွဋ်နေရင် နိုးပဲ… ညိုစိမ့်စိမ့်မှ ရင်ခုန်မိ ..တချိန်လုံး ရယ်နေရင် မကြွေဘူး … တည်နေရင်လည်း မကြိုက်ဘူး… ချိုမြမြ လေးပြုံးတတ်မှ ဒဲ့ကြွေ…ဆင်းရဲနေလည်း အဆင်မပြေဘူး … ချမ်းသာနေလည်း အ မြင်ကတ်တယ်…. မရှိမရှား ရိုးသား ကြိုးစားလေး ok တယ်…အရပ်မရှည်ချင်နေ.. အကောင်သေးရင်တော့ မဖွာဘူးကွယ်…
Six pack လောက်တော့ မ မျှော်မှန်းပေမယ့် .. ဗိုက်ပူရင်တော့ မရဘူး… Ro တတ်ရင်လည်း ရယ်ချင်လို့…. သာမန်လေးဆို အဆင်ပြေတယ်…ရှက်တတ်နေရင် စိတ်မရှည်သလို … လက်ရဲ ဇာတ်ရဲဆိုလည်း ဝေးဝေးရှောင်တယ်…အမေချစ်သားဆို ကြောက်လွန်းလို့ … အမေအပေါ်တောင် မသိတတ်ပြန်လည်း အထင်မကြီးဘူး..ပညာ မတတ်ရင် မလေးစားနိုင်ပေမယ့်… တတ်လွန်းပြီး ဟောင်ဖွာနေလည်း အထင်မကြီးဘူး …အမလေး… တော်သေးပီ… မောသွားပြီ …ဒီပုံတိုင်းဆို မတ်မတ်ခင် တစ်ယောက်တော့ အပျိုကြီး ဖြစ်သွားပါမယ် လာပြောတဲ့သူ ဘလော့ပါမယ်နော်” ဆိုပြီး ရေးသားကာမျှဝေခဲ့ပါတယ်။
မိန်းကလေးတိုင်း ယောက်ျားလေးတိုင်းကတော့ ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ခင်ပွန်းလောင်း၊ ဇနီးလောင်းဖြစ်လာမယ့်သူတွေအပေါ်မှာ ဒီလိုဖြစ်မှ၊ ဟိုလိုဖြစ်မှဆိုတဲ့ စံနှုန်းထားသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ ရှိစမြဲပါ။ အရာရာပြီးပြည်စုံတယ်လို့ ထင်ရတဲ့သူတွေကလည်း ကိုယ့်စံနှုန်းနဲ့ မကိုက်ညီနေရင် အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ခင်သဇင်ကတော့ သူလိုချင်တဲ့ချစ်သူ ခင်ပွန်းလောင်းတစ်ယောက်မှာရှိရမယ့် သူသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေကို မျှဝေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးမှာရော ကိုယ့်အနာဂတ်ကြင်ဖော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံနှုန်းတွေရှိလား မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
ကိုယျ သဘောကြ တဲ့ကောငျလေး ရဲ့ပုံစံ ကို ပရိသတျ ကိုမြှဝလေိုကျ တဲ့ ခငျသဇငျ
ရုပျ ရှငျသရုပျဆောငျမငျးသမီးခြောလေး ခငျသဇငျကတော့ လယောဉျမယျတဈယောကျဘဝကနေ အနုပညာရှငျတဈယောကျဘဝကို ကူးပွောငျးလာသူပါ။ ကိုယျပိုငျအရညျအခငျြးအပွညျ့နဲ့ ကွိုးစားအားထုတျမှုတှကွေောငျ့ ပရိသတျအသိမှတျပွုတဲ့သရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈလာသလို မကွာသေးခငျက MRTV-4 မှာထုတျလှငျ့ပွသခဲ့တဲ့ အခဈြဖှဲ့လညှေငျး ဇာတျလမျးတှဲမှာလညျး မိုးကလြာ ဇာတျရုပျနဲ့ ပရိသတျအားပေးမှုအခိုငျအမာရရှိ ခဲ့ပါသေးတယျ။
အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျပွီး ဘာမှမထူးသေးတဲ့ခငျသဇငျကတော့ ဒီနမှေ့ာ သူသတျမှတျထားတဲ့ အနာဂတျခငျပှနျးလောငျးတဈယောကျမှာ ရှိရမယျ့အခကျြတှကေို မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ ” ကိုယျကွိုကျတဲ့ အဆငျဆိုတာ ရှိပွီးသား… ယောကျြားလေးဆို အမှေးအမြှငျပါမှ – ဥပမာ_ ပါးသိုငျးမှေး.. ခွလေကျ အကွောဆို ထောငျနမှေ ..အသားဆို ဖွူဥထှဋျနရေငျ နိုးပဲ… ညိုစိမျ့စိမျ့မှ ရငျခုနျမိ ..တခြိနျလုံး ရယျနရေငျ မကွှဘေူး … တညျနရေငျလညျး မကွိုကျဘူး… ခြိုမွမွ လေးပွုံးတတျမှ ဒဲ့ကွှေ…ဆငျးရဲနလေညျး အဆငျမပွဘေူး … ခမျြးသာနလေညျး အ မွငျကတျတယျ…. မရှိမရှား ရိုးသား ကွိုးစားလေး ok တယျ…အရပျမရှညျခငျြနေ.. အကောငျသေးရငျတော့ မဖှာဘူးကှယျ…
Six pack လောကျတော့ မ မြှျောမှနျးပမေယျ့ .. ဗိုကျပူရငျတော့ မရဘူး… Ro တတျရငျလညျး ရယျခငျြလို့…. သာမနျလေးဆို အဆငျပွတေယျ…ရှကျတတျနရေငျ စိတျမရှညျသလို … လကျရဲ ဇာတျရဲဆိုလညျး ဝေးဝေးရှောငျတယျ…အမခေဈြသားဆို ကွောကျလှနျးလို့ … အမအေပျေါတောငျ မသိတတျပွနျလညျး အထငျမကွီးဘူး..ပညာ မတတျရငျ မလေးစားနိုငျပမေယျ့… တတျလှနျးပွီး ဟောငျဖှာနလေညျး အထငျမကွီးဘူး …အမလေး… တျောသေးပီ… မောသှားပွီ …ဒီပုံတိုငျးဆို မတျမတျခငျ တဈယောကျတော့ အပြိုကွီး ဖွဈသှားပါမယျ လာပွောတဲ့သူ ဘလော့ပါမယျနျော” ဆိုပွီး ရေးသားကာမြှဝခေဲ့ပါတယျ။
မိနျးကလေးတိုငျး ယောကျြားလေးတိုငျးကတော့ ကိုယျ့ရဲ့အနာဂတျခငျပှနျးလောငျး၊ ဇနီးလောငျးဖွဈလာမယျ့သူတှအေပျေါမှာ ဒီလိုဖွဈမှ၊ ဟိုလိုဖွဈမှဆိုတဲ့ စံနှုနျးထားသတျမှတျခကျြတှကေတော့ ရှိစမွဲပါ။ အရာရာပွီးပွညျစုံတယျလို့ ထငျရတဲ့သူတှကေလညျး ကိုယျ့စံနှုနျးနဲ့ မကိုကျညီနရေငျ အဆငျပွမှောမဟုတျပါဘူးနျော။ ခငျသဇငျကတော့ သူလိုခငျြတဲ့ခဈြသူ ခငျပှနျးလောငျးတဈယောကျမှာရှိရမယျ့ သူသတျမှတျထားတဲ့အခကျြတှကေို မြှဝခေဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးမှာရော ကိုယျ့အနာဂတျကွငျဖျောနဲ့ပတျသကျပွီး သတျမှတျထားတဲ့ စံနှုနျးတှရှေိလား မှတျခကျြပေးခဲ့ပါဦးနျော။
သမီးလေးတဈယောကျထပျရတော့မယျ့ မွငျ့မွတျကို ဝိုငျးဝနျးဂုဏျပွုရငျး ပြျောရှငျနကွေတဲ့ ယုနျလေးတို့ အဖှဲ့
ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျတှဖွေဈကွတဲ့ မွငျ့မွတျ၊ထူးခွား၊ကညေီနဲ့ ယုနျလေးတို့ကတော့ ညီအဈကိုအရငျးတှလေိုမြိုး အရမျးခငျမငျရငျးနှီးကွတာဖွဈပါတယျ။မွငျ့မွတျတို့က တဈယောကျရဲ့အခကျအခဲကိုလညျး တဈယောကျကကူညီပေးပွီး အပွနျအလှနျဖေးမကွတာဖွဈပါတယျ။အနုပညာလောကမှာလညျး မွငျ့မွတျတို့က နရောတဈနရောကနရေပျတညျနပွေီး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိထားတာဖွဈပါတယျနျော။ မွငျ့မွတျကတော့ ကိုယျပိုငျမိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနထေိုငျနတောဖွဈပါတယျ။မွငျ့မွတျရဲ့ ခဈြဇနီးလေးကတော့ ဒုတိယရငျသှေးလေးကိုလှယျထားရပွီး မကွာတော့မယျ့အခြိနျမှာ မှေးဖှားတော့မှာဖွဈပါတယျ။မွငျ့မွတျက ခဈြဇနီးလေးကိုလညျး ကွငျကွငျနာနာနဲ့ ဂရုစိုကျပေးပွီး အရမျးခဈြလို့ ခငျပှနျးကောငျးပီသတဲ့သူဖွဈပါတယျနျော။ မွငျ့မွတျ၊ထူးခွား၊ကညေီနဲ့ ယုနျလေးတို့က Liveလှငျ့ပွီးလညျး ပြျောပြျောပါးပါး ဈေးရောငျးကွပါတယျ။အခုဆိုရငျလညျး မွငျ့မွတျတို့အဖှဲ့က အောငျလအနျဆနျးရဲ့ပှဲကို အားပေးနကွေရငျး သီတငျးကြှတျမှာ ပြျောနကွေတာဖွဈပါတယျ။ယုနျလေးတို့ကတော့ သမီးလေးတဈယောကျထပျရတော့မယျ့ မွငျ့မွတျကို ဝိုငျးဝနျးပွီး ဂုဏျပွုနကွေကာ သူငယျခငျြးတှေ စညျးစညျးလုံးလုံးရှိနကွေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါရစနေျော။ Video ကွညျ့ရနျ Swelsone News
အေးချမ်း သာယာမှုတွေပြည့်နှက်နေ တဲ့ ကလောမြို့လေး ကို ချစ်သူကောင်လေး နဲ့ အတူတူ သွားလ ည်ချင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ ပိုပို
အေးချမ်း သာယာမှုတွေပြည့်နှက်နေ တဲ့ ကလောမြို့လေး ကို ချစ်သူကောင်လေး နဲ့ အတူတူ သွားလ ည်ချင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ ပိုပို အဆို တော် ပိုပိုကတော့ “ချစ်ဖူးခဲ့သမျှ” အယ်လ်ဘမ်နဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ များစွာပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပိုက လက်ရှိမှာတော့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နေသလို သူမရဲ့ မနဲ့မောင် အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကိုလည်း သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပိုက သူမထက် အသက် (၁၃)နှစ်ငယ်တဲ့ ချစ်သူကောင်လေးနဲ့ နားလည်မှုရှိတဲ့ ချစ်သူဘဝလေးကို ခိုင်မာအောင် တည်ဆောက်နေလျက်ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ ပိုပိုက ကလောမြို့လေးကို ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး အေးချမ်းသာယာမှုတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ ကလောမြို့လေးကို ချစ်သူမောင်နဲ့ အတူတူ သွားလည်ချင်သေးတဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲပြောထားပါတယ်။ “အခု လေဆိပ် ဆင်းနေပြီ။ ရန်ကုန်မှာ သီချင်း အသစ်တွေ လုပ်ဖို့ […]
အခြေ အနေ မဟန် ရင် ဆိုက်ကား နင်း သင့် နင်းရ မှာပဲ ဆိုတဲ့ လူရွှင်တော် “မျောက် ရှုံး”
အခြေ အနေ မဟန် ရင် ဆိုက်ကား နင်း သင့် နင်းရ မှာပဲ ဆိုတဲ့ လူရွှင်တော် “မျောက် ရှုံး” ကိုဗစ်ကာလ အတွင်းမှာ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေ နားထား ရတဲ့ လူရွှင်တော် မျောက်ရှုံးက ပရိသတ်တွေအတွက်5stars entertainment Page ကနေ ဟာသ ဗီဒီယိုလေးတွေ တင်ပေးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။အနုပညာကို ရူးသွပ်လွန်းတဲ့ လူရွှင်တော် သရုပ်ဆောင် ‌မျောက်ရှုံး ကတော့ ပွဲတွေ နားထား ရတာတောင် ပရိသတ်တွေ အတွက် သူတတ်ကျွမ်းတဲ့ အနုပညာအလုပ် နဲ့ ဖျော်ဖြေနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာလ အတွင်းမှာ အခြားစီးပွားရေးကို မလုပ်တတ်ပေမယ့် သူတတ်ကျွမ်းတဲ့အနုပညာနဲ့5stars entertainment Page […]
အိမ်အကူ မိန်းကလေးဘက်က ကျွန်တော်တို့ ကို အကြာကြီး ထောင်ထဲမှာနေရအောင်လုပ်ေ န တယ်လို့ ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ မင်းရာဇာ
အချစ်ရေး မှာ ကံမကောင်းခဲ့ပေ မယ့် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ် က ခွန်အားတစ် ခု ဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး